Vhidhiyo: Kushambadzira Kunogadzira Chigadzirwa? | Martech Zone
Ichi chiitiko chinonakidza uye chinonakidza kubva kuna Frank Dale, CEO we Kuwedzera. Ini ndinonyatso kuziva makambani mashoma uko kushambadzira kunowanda mushandisi ruzivo uye masevhisi icho chigadzirwa chinopa. Muchokwadi, ini ndanyatsokumbira kuratidzira kusatombovhura iwo manyorerwo avo, pachinzvimbo kushanda pasuru inopenya uye inopenya. Iyo haisiyo nyaya kana chigadzirwa chako chakashambadzirwa, asi ini ndakachiona chichipaza mamwe makambani apo kushambadzira kuri kufotokodzwa, kuwedzeredza kukwezva kupfura kwechigadzirwa chaicho.
Kushambadzira kunoisa zvinotarisirwa, kutengesa kunovasimbisa uye kunotora komisheni, mutengi anosaina uye anobva aregedzerwa pasi. Dambudziko rinongokunguruka kudzika kune manejimendi manejimendi uye zvikwata zvevashandi. Izvo zvikwata zvine kuchengetwa seimwe yeakakosha maitirwo ekuita… saka kana makambani abva kana kusavandudza, manejimendi manejimendi uye zvikwata zvevashandi zvinoitirwa kuzvidavirira Kuzvidavirira kune chimwe chinhu chiri kunze kwekutonga kwavo.
Chinhu chakarurama kuita here? Ini handifunge kumirira zvisizvo chigadzirwa chako ingangove chinhu chakakodzera kuita. Nekudaro, mamwe emakambani anozviita anowanzokura nekukurumidza. Nekukura nekukurumidza, ivo vanokwanisa kuhwina mugove wemusika, kuhwina kudyara, uye kudzoreredza kune batana kumufananidzo wavakaratidza. Kana mamwe emakambani aya ari kugadzira makumi kana mazana emamirioni emadhora, zvakandiomera kuti nditi izano rakaipa. Ndichimwe chinhu chandisingade. Handidi makambani anozviita. Uye ini handidi kukurudzira makambani aya kune vatengi vangu.
Tags: chigadzirwachigadzirwa manejimendikushambadzira kwechigadzirwaRC KupenyaIyo Whitest Vana U'Know
Kutarisa: Marketpath CMS uye Ecommerce
Aug 23, 2011 na7:31 PM
Hahaha, "sei mutengi angasarudza incandescent chinwiwa?"
Vhidhiyo yakanaka Doug asi ndinofanira kutaura kuti mavhidhiyo ane hukama anowedzera kuseka uye anonyanya kunakidza nekudzika kwaunonyura.